Filling Attendant (Part-Time) | Max Energy
Filling Attendant (Part-Time)
-Customer အားယဉ်ကျေးပျူငှာစွာဖြင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရမည် ။
-Customer ၀ယ်ယူသည့်ဆီအမျိုးအစားအား တိကျမှန်ကန်စွာဖြင့် ဂရုတစိုက်ဝန်ဆောင်မှု ပေးရမည် ။
-Customer မှငွေရှင်းပြီးပါက သက်ဆိုင်ရာငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းနှင့်တကွ လိုအပ်ပါက ပြန်အမ်းငွေအား ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည်။
-သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဝတ်ဆင်ရန်သတ်မှတ်ထားသော Safety Shoes, Uniform , နှင့် PPE Products များအား သန့်ရှင်းစွာဝတ်ဆင်သုံးစွဲရမည် ။
-တာဝန်ကျရာ Shift အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ Shift Leader (အဆိုင်းခေါင်းဆောင်) နှင့် တာဝန်ခံ ၏လမ်းညွှန်မှု ၊ တာဝန်ပေးအပ်မှုအတိုင်းလိုက်နာရမည် ။
-Company မှချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည် ။
-သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များတွင်(အချိန်ပြည့် Day ) တက်ရောက်ဆဲကျောင်းသား/ကျောင်းသူဖြစ်ရမည်။
-Basic Computer Knowledge ရှိသူဖြစ်ရမည်။
-(Yangon Division, Mandalay Division,Bago Division,Ayeyarwaddy Division, Mon State) တို့တွင်ဦးစားပေးခန့်ထားရန်
Meet Experienced organization
Good potential in future development
Learn new skills in Job
Are you University (Day) Stundent?
Did you interested in this position?
Do you think you will get many knowledges from our company?
Filling Attendant (Contract) Max Energy Customer Service Assistant Hayman Capital Microfinance Co,Ltd Seller Support Executive Shop.com.mm Customer Service Associate Myanmar Net Customer Care Executives ananda Customer Service (Junior Executive) IKBZ Insurance Co.,Ltd Customer Service Executive Synapse Original Claim (Junior Executive) IKBZ Insurance Co.,Ltd Volunteer For Two Days BFI Education Services Co., Ltd Product Support KBZ Bank Claims (Survey) IKBZ Insurance Co.,Ltd Junior Executive ( Door To Door Services ) IKBZ Insurance Co.,Ltd